Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || के भरतपुरमै सम्भव छ कोरोना परीक्षण ? – kayakairan.com
के भरतपुरमै सम्भव छ कोरोना परीक्षण ?
१२ चैत्र २०७६, बुधबार १९:१५
भरतपुर, १२ चैत
लक्षण मिले पनि कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना छ कि छैन भनी थाहा पाउन घाँटीबाट ¥याल निकालेर परीक्षण गराउनुपर्छ । जसलाई स्वाब भनिन्छ । अहिले यो सुविधा काठमाडौंमा मात्रै उपलब्ध छ ।
चितवनलाई मेडिकल सिटी भनिए पनि कोरोना परीक्षण गर्ने सुविधा छैन । भरतपुरमा कोरोना विशेष अस्पताल स्थापना गरिएको छ । तर, शंकास्पद बिरामीको स्वाब निकालेर काठमाडौं पठाउनुपर्छ । काठमाडौं पु¥याउनै समय लाग्छ भने त्यहाँ पनि देशभरबाट आएका स्वाब परीक्षणका लागि पालो कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ ।
“हिजो सन्तोष यादवको निधन हुँदा छिटो रिपोर्ट निकाल्न पनि धेरै मेहनत गर्नुप¥यो”, कोरोना विशेष अस्पतालका प्रवक्ता डा. भोजराज अधिकारी भन्छन्, “स्वाब पठाउन पनि समस्या, रिपोर्ट चाँडै पाउनै समस्या छ ।”
विमान चलुञ्जेल केही सजिलो थियो । तर, लकडाउनसँगै आन्तरिक उडानसमेत स्थगित भएपछि गाडीमा पठाउनुको विकल्प छैन । “गाडीमा पठाउँदा कहिले जाम हुने, कहिले के हुने समस्या छ”, डा. अधिकारी भन्छन्, “त्यसैले यहीं परीक्षण गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो ।”
उनले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि यो कुरालाई उल्लेख गरेका छन् । “कोभिड टेस्ट भरतपुरमै गर्न सकिने सम्भाव्यताको सघन अध्ययन हुँदैछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चितवनमा परीक्षण गर्नुपरे पीसीआर मेसिन किन्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंको केन्द्रीय प्रयोगशालामा समेत यो मेसिन अहिले ४ वटा मात्रै छ ।
कसरी गरिन्छ परीक्षण ?
नेपालमा कोरोना भाइरसको परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिन्छ । शंकास्पद व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने भए नमूना सम्बन्धित अस्पतालले संकलन गरेर प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिरामी सिधै प्रयोगशालामा जान पाउँदैनन् ।
भिटिएम (भाइरल ट्रान्समिसन मिडिया) मा संकलन गरिएको नमूनालाई ट्रिपल प्याक गरी कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर एनपीएचलमा पठाइन्छ । भाइरल ट्रान्समिसन मिडिया भनेको तापक्रम व्यवस्थापन गर्ने भाँडो हो । रगत संकलनका लागि बोकिएको ब्यागजस्तै ।
यो परीक्षण अहिले निःशुल्क हुने गरेको छ । डाक्टरको परामर्शपछि मात्रै कोरोना टेस्ट गर्न सकिन्छ । भिटिएममा संकलन गरिएको नमूनालाई ट्रिपल प्याक गरी कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर ल्याइएको खण्डमा २४ सै घण्टा प्रयोगशालामा संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसको रिपोर्ट आउन २४ देखि ४८ घण्टासम्म लाग्छ ।
फास्ट ट्रयाकबाट ८ घण्टामा पनि निकाल्ने गरिएको छ । यदि रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा सम्बन्धित अस्पताल र डाक्टरलाई तुरुन्त जानकारी गराइने प्रयोगशालाले जनाएको छ ।